Fitandremana amin'ny fametahana vy tsy misy vy - China Foshan Hermes Steel
Laser fanapahana laser
nisosa Stainless Steel Sheet
Takelam-bolo tsy misy fangarony
Takelaka vy tsy misy vy No.4
Hovitrovitra Stainless Steel Sheet
Takelaka vita amin'ny volo tsy misy fangarony
Takelaka vita amin'ny vy tsy miova amin'ny PVD
voasokitra ato Stainless Steel Sheet
Takelaka vy tsy misy fangarony
Takelaka vita amin'ny vy tsy misy fangarony
Takelaka vy tsy misy antitra
Takelaka vy vy manohitra ny rantsantanana
Varavarana miharo vy miakatra vy
Steel Wall Elevator Wall Panel
Taratasy fanamafisam-peo tsy misy vy
Handrails vita amin'ny vy mahery
Takelaka vy tsy miovaova
Takelaka vy tsy misy fangarony Mosaic
Takelaka vy tsy misy fangarony 3D
Fitandremana amin'ny fametahana vy tsy misy vy
Ny takelaka vy mitafy vy tsy misy fangarony dia misy karazany roa amin'ny takelaka vy, ao anatin'izany ny firakotra (vy tsy misy fangarony) sy ny sosona fototra (vy vy, vy marevaka ambany). Satria misy fitaovana roa vita amin'ny vy vita amin'ny perla sy vy austenitika rehefa mihodina vy tsy miendrika vy, ny famafazana takelaka vy mifono vy dia an'ny famafazana vy tsy mitovy. Noho izany, ny fepetra mifanaraka amin'izany dia tokony horaisina mandritra ny fizotran'ny welding mba tsy hahatratra ny fepetra takian'ny tanjaky ny firafitry ny sosona fototra, fa ny fiantohana ny harafesin'ny fonosana. Raha tsy mety ny fandidiana dia hisy vokany ratsy eo aminy izany. Ireto ny fepetra raisina manokana mandritra ny welding.
1, ny karazam-boaloboka mitovy amin'izany dia tsy azo ampiasaina hanamboarana singa vy mitambatra. Ho an'ny singa vy mifangaro vy, dia ilaina ny mahafeno ny fepetra takian'ny tanjaky ny welding amin'ny sosona fototra ary hiantohana ny fanoherana ny harafesin'ny fonosana. Noho izany, ny famafazana vy tsy misy fangarony dia manana ny mampiavaka azy. Ny sosona ifotony sy ny sosona ifotony dia tokony hasiana vy vy sy vy elektrika ambany mifangaro amin'ny fitaovana sosona fototra, toy ny E4303, E4315, E5003, E5015, sns. ho an'ny sosona mitafy lamba dia tokony hialana ny fitomboan'ny karbaona. Satria ny fitomboan'ny karbaona ny las dia hampihena be ny fanoherana ny harafesin'ny vatan'ny vy mitambatra. Noho izany, ny welding ny cladding sy ny cladding dia tokony hisafidy ny electrode mifanaraka amin'ny cladding material, toy ny A132 / A137, sns. ny famafana ny sosona tetezamita eo amin'ny fihaonan'ilay sosona ifotony sy ny fametahana dia tokony hampihena ny fihenan'ny vy karbonika amin'ny firafitry ny vy tsy misy fangarony ary hameno ny fizotran'ny famafana Fahaverezan'ny firafitry ny firaka. Cr25Ni13 na Cr23Ni12Mo2 karazana electrodes misy chromium avo sy atiny nikela azo ampiasaina, toy ny A302 / A307.
2. Ho an'ny fantsom-by vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny sisiny tsy mety dia tsy tokony hihoatra ny sanda azo avela (1mm). Ny takelaka vy mifono vy dia matetika misy sosona fototra sy sosona mitafy 1.5 ka hatramin'ny 6.0 mm ihany ny hateviny. Raha dinihina fa ankoatry ny fanomezana fahafaham-po ny toetra mekanika an'ireo singa, ireo singa vy mitambatra tsy misy fangarony koa dia mila miantoka ny fanoherana ny harafesin'ny fonosana mifandray amin'ny medium manimba. Noho izany, rehefa manangona ny vy, dia ilaina ny mampifanaraka ny sosona fametahana ho fototra, ary ny sisin'ny sosona mifono dia tsy tokony hihoatra ny 1mm. Zava-dehibe indrindra izany rehefa manamboatra takelaka vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny hateviny samihafa. Raha toa ka be loatra ny tsy fitoviana eo anelanelan'ny sosona fanaovana cladding, ny lasitra amin'ny foton'ny sosona ifotony dia mety handrendrika ny sasany amin'ny vy tsy misy fangarony, izay mampitombo ny singa vy ao amin'ny las ao am-pototry ny sosona fototra, ka mahatonga ny weld ho lasa mafy sy mora volo, ary miaraka amin'izay koa dia mihavitsy ny vy tsy misy fangarony amin'ny vody volo. Ny hateviny dia hampihena ny androm-piainan'ny serivisy, hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny lasitra amin'ny sosona cladding, ary sarotra ny miantoka ny fanoherana ny harafesin'ny firafitry ny vy.
3, voarara tanteraka ny fametahana ny sosona fifindrana na ny fantsom-boaloboka amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny fitaovana fantsom-bozaka amin'ny fantsom-pandrefesana: miaraka amin'izay koa ny fisorohana ny fantsom-paty mitaingina ny lasitra fanodinana ny soson'ny tetezamita ary sosona fototra.
4. Rehefa ampiasaina ny lasitra sosona ifotony hampiasana ny sosona amin'ny sisiny fametahana, ny vahaolana vita amin'ny tsaoka dia tokony hosaronina ao anatin'ny 150mm amin'ny lafiny roa amin'ilay lava-bato mba hiarovana azy io mba hisorohana ny akoran-nugget sosona ifotony tsy hipetaka amin'ny vatan'ny vy tsy misy fangarony mandritra ny fizotran'ny welding. Ny horonantsary oksida ety ambony dia misy fiatraikany amin'ny fanoherana ny harafesin'ny vy tsy misy fangarony. Ireo poti-javatra miparitaka izay nifikitra dia tsy maintsy diovina tsara.
5. Ny fakan-kazo amin'ny sosona fototra dia manamboatra fantsom-panafody electrode. Mba hampihenana ny fanalefahana ny singa mifangaro eo ambany fiantohana ny fidirana, dia tokony hahena ny fifangaroan'ny fusion. Amin'izao fotoana izao, ny fantsom-pandrefesana kely ary ny hafainganam-pandeha haingana dia azo ampiasaina. Avelao hiakatra ny sidina. Ny famafana ny cladding dia tokony hisafidy fampidirana hafanana kely, ka ny fotoana ipetrahana amin'ny maripana mampidi-doza (450 ~ 850 ℃) dia fohy indrindra araka izay azo atao. Aorian'ny fangejana dia azo ampiasaina amin'ny fampangatsiahana haingana ny rano mangatsiaka.
6, raha toa ka misy lesoka delamination ny vy tsy misy fangarony alohan'ny fikajiana dia tsy avela. Ny delamination dia tsy maintsy esorina aloha, welding welding (ie, overlay welding), ary welding aorian'ny fanamboarana.
7. Fitaovana manokana tsy maintsy ampiasaina hanadiovana ny sosona ifotony sy ny lafiny roa amin'ny fametahana akanjo. Ny sosona ifotony dia tsy maintsy mampiasa borosy tariby vy, ary ny fametahana lamba dia tsy maintsy mampiasa borosy tariby vy.
Fotoana fandefasana: Jan-06-2021
Manampia: 21 / F, Block 1, Jinchang International Metal Trading Market, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, Sina
Telefaona: + 86-757-29273045
Telefaona: + 86-757-29273047